Archive du 20190524
Mahana amin’ny nataony Rajoelina Matahotra ny hirodana sahady
Mazava ny fihetsik’i Andry Rajoelina mitety faritra io fa mila mahazo ny maro an’isa ao Tsimbazaza izy.
Fitantanan’ny Filoha Mihamafy ny firobarobana
Natao resabe ny politikan’ny fitsitsiana, nahena ny isan’ny minisitera, roahina ny mpiasa tsy raikitra, roahina ireo mpiasa sasany niditra tamin’ny andron’ny fanjakana teo aloha,…
Kandida manana raharaham-pitsarana Tokony haato, hoy ny mpahay lalàna iraisampirenena
Ny mahagaga ahy amin’ny CENI, hoy ny mpahay lalàna iraisampirenena, Arlette Ramaroson, dia ity filazana hoe « présumé innocent » amin’ireo kandida ho solombavambahoaka manana raharaham-pitsarana ity.
Fifidianana ao Miandrivazo Misy kandidà mpiaro dahalo
Mampisavorovoro ary mety hiteraka korontana ao Miandrivazo ny fivoizan’ny kandidà iray ny tanjony hiaro ireo dahalo nampahory ny vahoaka an-taona maro tany an-toerana rehefa ho lany solombavambahoaka ny tenany.
Delestazy tsy ifankahitana Mikomy amin-dRajoelina ny karana…
Maizina tanteraka ny ankamaroan’ny tanàna teto Antananarivo omaly takariva tamin’ny 5 ora sy sasany-8ora sasany.
BY-PASS Maty voadonan’ny fiara ilay mpangalatra
Tovolahy voalaza fa mpangalatra, manodidina ny 30 taona no maty voahitsaky ny fiarakodia madinika omaly maraina tokony ho tamin’ny 5 ora sy fahefany teny Ankazobe By-pass.
Vehivavy mpandraharaha ny fonja Nanangana birao nasionaly
Miezaka ny manampy hatrany ireo olona sahirana manodidina azy ny fikambanan’ny vehivavy mpandraharaha ny fonja sy ireo vadin’ny mpandraharaha ny fonja eto amintsika na ny AFAP.
Orinasa TELMA Handoa manontolo ny “prime de qualification” an’ny Barea
Tamin’ny anaran’ny maha mpikambana ao amin’ny “Commission de finance” azy ao amin’ny CAF no nanambaran’Atoa Patrick Pisal-Hamida “Administrateur Directeur Général de TELMA Madagascar”
Fiatrehana ny CAN 2019 Maro mpanohana ny BAREA
Naneho ny heviny tetsy Antaninarenina amin’ny fahavononan’izy ireo hanohana ny Barean’i Madagasikara amin’ny fiatrehana ny CAN 2019 any Egypte ireo
Aretina mamany lava Misy tranga vaovao 4 000 isan-taona
Vehivavy 5 hatramin’ny 7 no tonga manatona eny amin’ny hopitaly HJRA isam-bolana, hitsabo tena noho ny aretina mamany lava.
Mpitantana tobin-tsolika “Ambany loatra ny tombombarotray”
Nanatanteraka fivoriambe tetsy amin’ny Hotely Solimotel Anosy ireo mpitantana tobin-tsolika omaly alakamisy 23 mey. Anisan’izany ireo mpitantana ny orinasa mpaninjara solika Galana, Total-Jovena ary shell eran’i Madagasikara.
Fanafihana mpivarotra 80 tapitrisa ariary voaroba teny Andoharanofotsy
80.000.000 ariary no fitambaran’ny vola lasan’ny jiolahy nitondra basy poleta sy zava-maranitra tamin’ny tsenan’ny renim-pianakaviana teny Mahabo, Andoharanofotsy.
Centrafrique Manome 72 ora ho an`ny Vondrona 3R
34 no indray namoy ny ainy, dimy hafa naratra ny talata 21 mey lasa teo tamin`ireo toerana miisa telo tany Paoua ao Centrafrique noho ny voina manokana nataon`ny vondrona mitam-piadiana 3R (Retour, Reclamation, Reconciliation),
Parlemantera eoropeanina Seza 751 no hiadiana
Hiatrika ny fifidianana izay ho solombavambahoakany ny eo anivon` ny Vondrona Eoropeanina nanomboka omaly ka hatramin` ny alahady izao.
Rano fisotro madio Distrika 16 no hisitraka famatsiana
Nampitomboina 56 miliara ariary ny tetibola famatsiana rano fisotro madio ary olona 1,5 tapitrisa no hisitraka izany nmialoha ny faran`ny taona.
Famokarana gazy CFC Mbola misy mamokatra any Sina
Orinasa iray any avaratr’i Sina no nakatona satria mamokatra etona simika antsoina hoe “CFC-11”, izay heverin’ny manampahaizana ara-tsiantifika maneran-tany fa manimba ny sosona ozona (couche d` ozone).
Fisolokiana sy fanafihana Voasambotra ilay Togoley nangalatra entana 224.770.000 ariary
Voasambotry ny polisy ny alatsinainy 20 mey hariva tamin’ny 6 ora sy sasany hariva teo ilay teratany Togoley mpiambina nefa nangalatra ka namorona fa very noho ny fanafihana ny entana mitentina 224.770.000 ariary.